Maninona ny AIRBNB sy UBER no mety tsy fomba azo antoka fivezivezena any Costa Rica
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Maninona ny AIRBNB sy UBER no mety tsy fomba azo antoka fivezivezena any Costa Rica
Ny fandehanana any Costa Rica sy ny fijanonana ao amin'ny AIRBNB ary ny fandraisana UBER dia mety tsy fanapahan-kevitra azo antoka. be faty dia voalaza fa hita ny alatsinainy teo tao amin'ny trano Costa Rican izay nonina vehivavy Florida izay nanjavona vao tsy ela akory izay. Fikaroham-pianakaviana iray no mitady valiny taorian'ny fanjavonan'ny vehivavy Florida iray fitsingerenan'ny andro nahaterahany niaraka tamin'ny zaobaviny tamin'ny herinandro lasa teo tany Costa Rica - ora vitsy monja talohan'ny nanaterana azy fa hiverina any Etazonia.
Faty iray no hita tao ambadiky ny toerana Airbnb izay nitoeran'i Carla Stefaniak, avy any Miami, nandritra ny fankalazana ny faha-36 taonany, araka ny filazan'ny Sampan-draharahan'ny fanadihadiana ao Costa Rica.
Miahiahy ny fianakaviana fa nalaina ankeriny i Stefaniak, araka ny pejy Facebook iray natokana hanampy azy hahita azy. Ny tompon'ilay Airbnb izay nitoerany dia voalaza fa nilaza tamin'ny fianakavian'i Stefaniak fa hita farany niditra tao anaty Uber niaraka tamin'ny valizy izy ny alarobia teo.
Na izany aza, ny tantaran'ny fampiharana an'i Stefaniak's Uber dia tsy maneho ny fandraisany dia tamin'izany fotoana izany.
Hatramin'ny alatsinainy tolakandro dia nanoratra tao amin'ny Facebook ny fianakaviana fa “mbola niasa tsy nisy fiasa izy ireo nitady an'i Carla sy nitondra azy mody soa aman-tsara.” Izay rehetra manana vaovao momba ny fanjavonan'i Stefaniak dia entanina hifandray amin'ny FBI.
Tonga tany Uber sy AIRBNB ny eTN fa tsy nisy hevitra fanampiny nomena.
Lahatsoratra eTN misimisy kokoa momba ny UBER
Lahatsoratra eTN misimisy kokoa momba ny AIRBNB
Lahatsoratra momba ny eTN misimisy momba an'i Costa Rica
Ny label Seychelles Sustainable fizahan-tany maharitra dia navaozina ho an'ny hotely telo lehibe: nanampy mpikambana vaovao amin'ny hetsika ara-tontolo iainana
Ny turista sinoa dia mitana an'i Destination Thailand